Burmese taste - Iora: ငပိရည်ဖျော်တုို့ စရာ၊ ငါးစူစီကြော်၊ ငါးခူရဲယိုရွက်အစားထုိုးနောက်တစ်မျိုး နဲ့ ငပိထောင်း
Posted by Iora at 5:17 PM
မျိုးခန့် ပုပ္ပား January 25, 2016 at 7:33 AM
အခုမှနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာတာ :)ကျနော်လည်း ငါးကိုအဲ့ဒီလိုကြော်စားမယ်ဆိုပြီး
ငါးဝယ်ပြီးကြော်စားကြည့်အုံးမယ် :) ကော်ဖီနဲ့ပေါင်မုန့်ကလွဲပြီး ကျန်တဲ့ဟင်းတွေ
Iora January 25, 2016 at 5:32 PM
တင်သာမတင်ဖြစ်တာ ချက်တုိုင်းနီးနီး ဓါတ်ပုံတွေတော့ရုိုက်ထားဖြစ်တယ်။
အဲလိုငါးစူစီကြော်နဲ့ သရက်ချဉ်သုပ်တုို့ ဘာတုို့ နဲ့ လည်းလိုက်တယ် သိလား။
ရွှေညာသားလေးတုို့ စီမှာ ရဲယိုရွက် ရမယ်ထင်တယ်နော်။
မျိုးခန့် ပုပ္ပား January 29, 2016 at 4:06 AM
မနီလာမြို့ပေါ်မှာတော့ ရဲယိုရွက်မတွေ့မိဘူး။၂၀၁၃ လောက်တုန်းက
မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်မှပဲ အ၀ချက်စားတော့မယ်အစ်မရေ :)
Iora January 29, 2016 at 7:36 AM
Shwe Nyar Thar Lay,
Thanks for coming back and commenting again.
သက်ဝေ February 3, 2016 at 4:47 PM
ငါးကြော်ပန်းကန် မ ပြေး သွားပြီ... ဟိဟိဟိ
Iora February 13, 2016 at 6:34 PM
ငါးကြော်ပန်းကန် မ ပြေးသွားတာ မသိလိုက်ဘူး။
ဗကေးရှင်းသွားနေတာ နဲ့ ဘလော့ကို မကြည့်ဖြစ်လို့ ။
မ ပြေးသွားလို့ ကျေးဇူး...ကျေးဇူး..
Anonymous February 11, 2016 at 3:11 AM
တို့လည်း သတိရတယ် ;)
Iora February 13, 2016 at 6:37 PM
Ma Tint February 12, 2016 at 1:24 AM
လွမ်းလို့ ဘလော့ကိုဝင်ခဲ့တယ် ဖတ်ပြီးတော့ ပိုလွမ်းသွားတယ် အိုင်အိုရာ ..... !_!
Iora February 13, 2016 at 6:38 PM
အုိုင်အိုရာလည်း လွမ်းနေတာ။ တကယ်။
Aung Htut February 12, 2016 at 10:16 PM
Iora February 13, 2016 at 6:40 PM
ညီလင်းသစ် February 19, 2016 at 3:14 PM
မဆုံဖြစ်တာ အတော့်ကိုကြာနေလို့ ဝင်နှုတ်ဆက်တာ မအိုင်အိုရာ...၊ ဟင်းတွေကတော့ အရင်အတိုင်း အရသာ ရှိမြဲပါပဲလေ..၊ ဘလော့ဂ်က မိတ်ဆွေတွေကို သတိရနေတယ်...။
Iora February 20, 2016 at 3:30 PM
မှတ်မှတ်ရရ လာလည်လို့ ကျေးဇူးပါ။